News18 Nepal || करोडौँका मालिक सुशान्तले किनेका थिए अन्तरिक्षमा जग्गा ! कति छ सम्पत्ति ? - News18 Nepal
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको एक साताअघि आफ्नै घरमा निधन भयो । उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले । एक साताअघि निधन भएका सुशान्त करोडौका मालिक थिए । उनी ५९ करोड भारु बराबरको सम्पत्तिका मालिक थिए ।
उनको घरमा मंहगा कार र मोटरसाइकल पनि छन् । त्यति मात्र होइन उनको चन्द्रमामा पनि आफ्नै जग्गा रहेको बताइएको छ । सूर्य, चन्द्रमामा, नक्षत्र ग्रह जस्ता ब्रम्हान्डिय वस्तुहरु बारे कुरा गरिरने उनी अन्तरिक्ष प्रेमी थिए ।
भगवान शिवजी भक्त रहेका उनले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा ओमको ब्रम्हान्डिय महत्व बारे पनि बिभिन्न पोष्ट गरि रहने गर्थे । बाइक र गाडीका अत्यन्त सौखिन उनले घरमा स्टाइलिस बिएमडब्ल्यु के १३०० आर मोटरसाइकल, लक्जरी स्पोर्टस कार मासेरटी क्वात्रोपोर्ते र ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर सभ राखेका थिए ।
ऋषि कपूरलाई सम्झदै नीतू कपूरले लेखिन् यस्तो भावनात्मक पोष्ट
सुशान्तले पासो लगाउनु बारे खुल्यो रहस्य, यस्तो रहेछ कारण
पासो लगाउनु अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ?
सुशान्तको निधन प्रकरण : निर्देशकदेखि प्रेमिकासम्मले दिए यस्तो बयान
सलमानलाई एकपछि अर्को आरोप, जिया खानकी आमाले खोलिन् यस्तो रहस्य
किन इन्स्टाग्राममा आलियाका ९ लाख फलोअर्स घटे ?
सुशान्तको खबर सुनेपछि भाउजुको पनि गयो ज्यान
यस्तो रह्यो सुशान्त सिंह राजपूतको जीवनको अन्तिम पल